Wararka - Kormeerka iyo dayactirka Transformer
Si loo xaqiijiyo shaqada caadiga ah ee Transformer-ka, waxa ay u baahan tahay in si joogto ah loola socdo oo loo ilaaliyo.
1 Waa in si joogto ah isha loogu hayaa cabbirka heerkulka heerkulka cabbiraha, shaqada beddelka waa in la qabtaa waqtiga, waana in fiiro gaar ah loo yeesho haddii uu jiro dhawaaq iyo gariir aan caadi ahayn.
2 Marka culayska saddexda weji ee transformer-ku aanu dheeli tirnayn, waa in lala socdaa heerka uu marayo heerka ugu weyn iyo heerkulka heerka ugu sarreeya.Inta ugu badan ee dhexdhexaadka ah ee la ogol yahay ee taransfooriyaha ku xidhan Yyn0 waa 25% wakhtiga xaadirka korantada yar.Xilliga dhexdhexaadka ah ee ugu badan ee uu oggol yahay beddelka Dyn11 wuxuu la mid noqon karaa kan hadda jira ee khadka hoose.
3 Marka transformer-ku leeyahay shuruudahan soo socda, sida shaqaynta marawaxada oo aan caadi ahayn;bandhig heerkul aan caadi ahayn;dildilaaca yar yar ee muuqaalka dahaarka xabagta dabaysha, iwm, looma ogola in ay ka gudubto meel ka baxsan magaca.Soo ogow sababta ama la xidhiidh saaraha si loo xaqiijiyo.
4 Guud ahaan meelaha qalalan iyo kuwa nadiifka ah, hubi sannadkii hal mar ama in ka badan;meelaha kale, sida ku orda hawo boodh leh ama ur bir ah, hubi saddex ilaa lixdii biloodba mar.Meelaha sida aadka ah u wasakhaysan, kormeerida dayactirka korontadu waa in la sameeyaa bil kasta.
5 Inta lagu jiro kormeerka, haddii la helo ururin xad-dhaaf ah oo boodh ah, waa in laga saaraa si loo hubiyo wareegga hawada loogana hortago burburka dahaarka, laakiin walxaha nadiifinta kacsan waa inaan la isticmaalin.Hawada ciriiriga ah ayaa boodhka ka soo saarta tubooyinka hawo-qaadista.Jihada ay u socoto hawada cufan waxay ka soo horjeedaa hawada qaboojinta marka uu taransfooriyuhu shaqaynayo.
6 Hubi in xidhidhiyeyaashii iyo xidhidhiyayaashu debecsan yihiin, in qaybaha korantada iyo qaybaha kaleba ay leeyihiin raad daxal iyo daxal, sidoo kale u fiirso in ay jiraan raadad kaarboonization iyo daxalka korantada ee dusha sare ee korantada.Haddii lagu helo, qaado tallaabooyinka ku habboon si aad wax uga qabato.